China Deep Drawing Aluminum Circle Manufacturer - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Fonosana Aluminium Deep
Description: Isika dia iray amin'ireo mpamokatra haingam-pitaovana alika lehibe indrindra any amin'ny faritra afovoan'i Sina, ary namokatra Aluminium Circle amin'ny 5years isika, ny kalitaona alim-bary dia mety ho tsara ho an'ny horonam-peo lalina sy ny famoahana ny fampiasana azy. Mirehareha amin'ny alàlan'ny kalitaon'ny alim-by izahay, ny kalitao dia manome ny ho avy. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra karazan-damba maro samihafa. Nataonay anay dia singa goavambe eo amin'ny Aluminium Circle. Ny tolotra omen'ny antsika dia natao amin'ny fitadidiana ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ny fitaovana tsara kalitao dia ampiasaina amin'ny fomba famokarana mba hahafahantsika ...
TOKONY HATSARAM-PANJAKA (Fitaovana DC): kofehy alimina ho an'ny tavoahangy hoditra, menaka fisaka, akora kesika, fitaovana fanenana fisotroana, pizza pizza, rice cookers, fitaovana fikarakarana sakafo, kafe urns, fitaovana elektrika, bakeware, mofo mofomamy. KOLONTSAINA FIFAMOIVONANA MASINA (CC MATERIAL): • Fipoirana miorina • Fampiroboroboana ny orinasa avo lenta • Fiatrehana arofanina • Reflektoren amin'ny hazavana • Fampiratiana ara-panatanjahantena. Taom-piofanana: 1000 Series Temper: O-H112 Karazana: Takelaka fampiasana: fitaovana fampakaram-bary, fitaovana, lakozia, indostrian'ny jiro Thickness: 0.2 ~ 0.6 Zava-bidy: 100 ~ 1000mm Fomba fitsaboana: circle for cookware 142 ...
Product Description Aluminium siramamy dia ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana ho an'ny fitaovana, fitaovana, fonosana, tavoahangy, fitaovam-pisakafoanana, lampshade, tariby sy famantarana famantarana ny fanalahidiny tena tsara. Ny alim-bary misy aliminioma dia azo alaina amin'ny fanodanana ny milina ary ny milina fanodinana amin'ny serivisy sy ny pensilihazo. Ny vokatra vita vita amin'ny alim-pitondran'ny alim-by dia manana lemaka manjelatra sy mamiratra ary tsy misy tratra na miposaka. Ny faribolan'ny alim-bary no safidy voalohany ho an'ny mpanamboatra cookware vokatry ny fananana trano maizim-pito sy ny vidiny. Ny alim-borona alim-borona dia famafazana fanafarana entana sy fandefasana entana mafy ho an'ny fiarandalamby lavitra lavitra: Ny foibe voalohany dia ny fivalanana plastice matevina. Ny singa faharoa dia perla ...
Ny kalitaon'ny alim-borona (Quality Aluminum Circle / Disc Disc pour la taille de fabrication fonctionnal de productage): Ireo kodiarana aluminium (China) dia antsoina koa hoe alim-borona, alim-boanjom-bary, alim-borona ary alim-borona. , 1050, 1060, 1070 etc. Temper: O, H1100, H3002, H3003, H3004 Thickness: 5052 "- 5754" (6061mm - 12mm) Surface: Polished, Bright, Anodized Hardness : Toe-karena tsy ampy, mora mamolavola, manindrona, manindrona ary mivelatra. Ny fananana ny alim-bodiaranay alim-bolana / fandaharana fanodinana rindran-damina aluminium Aluminium - famokarana fitrandrahana - famokarana fiompiana - DC Caster - tapa-kazo - scalper - mafana milina mafana - kilaometatra kilaometatra ...
Ho an'ny fitaovana fikarakarana, toy ny non-stick pan, fitaovana fandefasana fitaovana, Hardware sy cookie hono ary ny sisa. Ny ala manodidina ny alim-borona dia ny vokatra haingam-panaitra indrindra ampiasaina, ny haingam-pandehanana ambony, ny fanamafisana tsara, ny kalitaon'ny Anodized sy ny kalitao lalina izay mety ho an'ny cookware koa. 1. Fihetseham-po sy tanjaka mahery vaika; 2. Ny fahombiazan'ny fitantanana dia tsara, mametaka, manamboatra ny haavony; 3. Fiatoana amin'ny angovo, fiarovan'ny hydrogène, fiarovan'ny fanoherana sy ny fahasitranana; 4. Amboarina plastika, fitondran-tena ary fitondran-tena fitaratra; 5. Mora mandray ny karazana fanodikodinana fanerena sy fanitarana, mandondona; PROCESS PRODUCTION Amin'ny famokarana dia tsy maintsy manatanteraka ny rohy rehetra, ny tsipiriany rehetra, ary ny asa rehetra mety amin'ny ...